Farmaajo oo ka qeyb-galay munaasabad ka dhacday VILLA SOMALIA + Sawirro | Dalkaan.com
Home Warkii Farmaajo oo ka qeyb-galay munaasabad ka dhacday VILLA SOMALIA + Sawirro
Ujeedka munaasabaddan ayaa wuxuu ahaa in lagu weyneeyo maalinta aas-aaska Calanka ee 12-ka October, waxaanana salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga.
War kasoo baxay xafiiska Farmaajo, kadib munaasabadda ayaa waxaa marka hore hambalyo loogu diray shacabka Soomaaliyeed, iyada oo looga hadlay muhiimadda Calanka.
Sidoo kale madaxweyna muddo xileedkiisi dhammaaday ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda, si loo ilaaliyo dhaxalka awooweyaasheenna, jiilasha danbe na loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan.
Dhanka kjale Rooble ayaan ka qeyb-gelin munaasabaddan oo lagu xusayey maalinta qaran ee Calanka Soomaaliya, waxayna tani ay muujineysaa in weli meeshii ugu sarreysay uu taagan yahay khilaafka ka aloolsan Villa Soomaaliya ee u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble.
Ra’iisul wasaaraha ayaa isna dhankiisa si gaar ah ugu hambalyeeyey dadka Soomaaliyeed, kadib qoraal uu soo saaray goor sii horreyay wuxuuna yiri “Waxaan Ummadda Somaaliyeed ugu hambalyeynayaa maalinta calankeenna ee 12ka October oo ku beegan maanta oo kale 67 sano ka hor. Calankeena ha sarreeyo, gobannimada Soomaaliyeed ha waarto. Gallad waxaan u haynaa geesiyadii u soo halgamay difaaca Calanka iyo Ciidda,”.
Sanad walba maanta oo kale 12-October ayaa si weyn loo xusaa maalinta Calanka, iyada oo la qabto xaflado iyo damaashaadyo kale oo lagu weynaynayo markii ugu horeysay oo la isku raacay Calan Soomaaliya leedahay waxaana inta badan laga sheekayaa taariikhdiisa.
Previous articleROOBLE oo farriin culus u diray dadka Soomaaliyeed
Next articleReal Madrid oo tixgalineysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga Tottenham Hotspur Sergio Reguilon